ဧရာ(မန္တလေး) - ဧကရာဇ်မင်း၏ ဆုံးမစာ - MoeMaKa Media
Home / Ayer (Mandalay) / Literature / Thoughts / ဧရာ(မန္တလေး) - ဧကရာဇ်မင်း၏ ဆုံးမစာ
Ayer (Mandalay), Literature, Thoughts
(မိုးမခ) စက်တင်ဘာ ၂၃၊ ၂၀၂၀
“မကောင်းမှုတွေနဲ့ မင်းလက်တွဲ ချင်လို့လား။ ဒါဟာ ကပ်ရောဂါထက် ဆိုးလို့ ဝေးဝေးက ရှောင်ကြဉ်ရမယ် ဆိုတာကို အတွေ့အကြုံကနေ သင်ခန်းစာ မယူနိုင်သေးဘူးလား ....။ စိတ်ဓာတ် ပျက်စီးတယ်ဆိုတာက ရှူရှိုက်နေတဲ့ လေထုကို မသန့်မစင်ဖြစ်နေစေတဲ့ ကပ်ရောဂါထက် ပိုပြီး ကြောက်စရာကောင်းတယ်။ ကပ်ရောဂါက အသက်ကိုသာ သေစေနိုင်တယ်။ စိတ်ဓာတ် ပျက်စီးတာကတော့ လူသားမျိုးနွယ် တစ်ခုလုံးကို ကူးစက်ရန်ရှာတယ်” (Med 9.2)။
တလောက မားကပ်ဩရီးလီယပ်ရဲ့ Meditation စာအုပ်ကို “ဧကရာဇ်မင်းရဲ့ ဆုံးမစာ” ဆိုတဲ့ခေါင်းစည်းနဲ့ စာမြည်းသဘော ရေးခဲ့တယ်။ ကမ္ဘာတလွှားမှာ တရုတ်ပြည် ဝူဟန်ကနေ ကူးစက်လာတဲ့ ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါဘေးကို ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အခုလိုအချိန်မှာ ... သူစာအချို့က မှတ်သားစရာကောင်းတယ်။ ပလိပ်ကပ်ကို တိုက်ရိုက် ရည်ညွှန်းခဲ့တာကတော့ အထက်က စာပိုဒ်လေး တစ်ပိုဒ်ပဲ ရှိပါတယ်။
“လက်ရှိ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အရာအားလုံးက အတိတ်က ဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်... နောင်အနာဂတ်မှာ ဖြစ်နေဦးမှာပဲ လို့ မပြတ်ဆင်ခြင်ပါ ...” (Med. 10.27)
သူ့လက်ထက်မှာ အလွန်ဆိုးဝါးတဲ့ ပလိပ်ကပ်ဘေးကို ကြုံခဲ့တယ်။ သူ့ရဲ့ မင်းဆက်နာမည် Marcus Aurelius Antoninus ကို အစွဲပြီး Antonine Plague လို့ ဒီကပ်ရောဂါကို အမည်ပေးခဲ့ကြတယ်။ အရှေ့အလယ်ပိုင်း ဒေသမှာ သူပုန် ရန်ကို နှိမ်နင်းပြီး ပြန်လာတဲ့ စစ်သည်တွေက တဆင့် ရောမအင်ပါယာ တစ်ခုလုံးကို ရောဂါပြန့်သွားခဲ့တယ်။ တကယ့် ဇစ်မြစ်က တရုတ်ပြည်ကနေ စခဲ့ပြီး ပိုးလမ်းမကနေတဆင့် အရှေ့အလယ်ပိုင်း ဒေသကို ရောက်လာခဲ့တာလို့ အချို့က ဆိုတယ်။ ထားပါတော့ ကူးစက်မှုနဲ့ သေနှုန်းက အလွန်မြင့်မားတော့၊ တစ်ရက်တစ်ရက်မှာ လူထောင်နဲ့ချီ ဆုံးပါးပြီး ရောမမြို့ကြီးက သုဿန်တစ နီးနီး ဖြစ်သွားတယ်။
“လှိုင်းတွေ အဆက်မပြတ် ရိုက်ခပ်နေပေမယ့် ကြံ့ကြံ့ခံပြီး၊ ဒေါသမာန်ထနေတဲ့ လှိုင်းတွေကို ငြိမ်ဝပ်သွားအောင် ထိန်းကျောင်းပေးနိုင်တဲ့ ကျောက်ဆောင်လို ကျင့်ပါ” (Med. 4.49)
ကပ်ရောဂါက အလွန်ကြောက်စရာ ကောင်းပေမယ့် မားကပ်ဩရီးလီယပ်က နန်းတွင်းသမားတော်ကြီး ဂေလန်နဲ့ လက်တွဲပြီး ခေါင်းဆောင်ကောင်း ပီသစွာ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် ကြံ့ကြံ့ခံရင်ဆိုင်ခဲ့တယ်။ အသုဘ အခမ်းအနားတွေကို ကိုယ်တိုင်တက်ပြီး အားပေးမိန့်ခွန်းတွေ ပြောခဲ့တယ်။ နွမ်းပါးသူရဲ့ အသုဘကို နိုင်ငံတော်က ကျစေခဲ့တယ်။ နှစ်ရှည် အကြွေးတွေကို လျှော်ပေးခဲ့တယ်။ ကပ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေး အတွက် ကုန်ကျမယ့် စားရိတ်တွေအတွက် နန်းတွင်း ရတနာတွေကို ထုတ်ရောင်းပြီး ရန်ပုံငွေရှာခဲ့တယ်။
စတိုးဝစ်ဒဿန လက်ကိုင်ထားသူတွေရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း ကိုယ်မတတ်နို်ငတာတွေကို စိုးရိမ်ပူပန်နေမယ့် အစား ကိုယ်တတ်နိုင်တာတွေကို အကောင်းဆုံး လုပ်တယ်။ အရာရာကို ကိုယ့်ဘဝရဲ့ နောက်ဆုံးတမျှ အရေးပါတဲ့ အလုပ်လို တလေးတစား ဆောင်ရွက်တယ်။
“နေ့တိုင်းကို ကိုယ့်ဘဝရဲ့ နောက်ဆုံးနေ့ရက် အဖြစ်သဘောထားပြီး ပျာယာမခပ်ဘဲ, မတွန့်ဆုတ်ဘဲ, ဟန်မဆောင်ဘဲ လုပ်ဆောင်ခြင်းက အကောင်းဆုံး ကိုယ်ကျင့်စာရိတ္တပါ” (Med. 7.69)။
သေခြင်းတရားကို နှလုံးသွင်းတယ် (Momento mori) ဆိုတာက စိုးရွံ့ပူပန်နေဖို့ မဟုတ်ဘဲ၊ သံဝေဂ (sense of urgency) ယူပြီး ပစ္စုပ္ပန်ကို အပြည့်အဝ အကောင်းဆုံး နေထိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်ပါတယ်။
“နှစ်ထောင်နဲ့ ချီပြီး နေရမလို လုပ်မနေပါနဲ့။ သေခြင်းတရားဆိုတာ အနီးအပါးမှာ ရှိနေတယ်။ ရှင်သန်တုန်း စွမ်းနိုင်တုန်းမှာ ကောင်းအောင် နေပါ” (Med. 4.17)
“ဘဝဆိုတာ တိုတိုလေးပါ။ ပစ္စုပ္ပန် အခိုက်တန့်လေးကို အသိဉာဏ်, တရားမျှတမှုတို့နဲ့ အမြတ်ထွက်အောင် ကြိုးစားပါ။ မမေ့မလျော့နဲ့ ငြိမ်အေးစွာနေထိုင်ပါ” (Med. 4.26)
ရောမဘုရင် မားကပ်ဩရီးလီယပ်က သူ့ခေတ်မှာ ရှိခဲ့တဲ့ ကျန်းမာရေးအသိပညာ, အုပ်ချုပ်ရေးပညာတွေနဲ့ ကပ်ဘေးကို အကောင်းဆုံး ရင်ဆိုင်ခဲ့မယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။ တကယ်တော့ စံပြုရတဲ့ ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေက ခေတ်ကောင်းမှာ စံခဲ့ကြသူတွေထက် ခေတ်ဆိုးကို ရင်ဆိုင် ကျော်လွှားခဲ့ကြသူတွေက ပိုများပါတယ်။
ဧရာ(မန္တလေး) - ဧကရာဇ်မင်း၏ ဆုံးမစာ Reviewed by MoeMaKa on 3:42 PM Rating: 5
ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း(သင်္ချာ) ဘာသာပြန် အပျင်းပြေသင်္ချာဉာဏ်စမ်းများ ထွက်ပြီ
ဇင်လင်း - ငြိမ်းချမ်းရေးကင်းမဲ့နေပါက ၂၀၂၀ အလွန်တွင် လက်နက်အားကိုးဝါဒ ကြီးထွားလာမည်ကို သတိပြု
ဂျူနီယာဝင်း - သင့်အနာဂတ်ကို ပြောပြမယ့် ပြင်သစ်ကဒ်များ -၁
နေစိမ့် - အနမ်းရှင်
ဂျူနီယာဝင်း - သင့်အနာဂတ်ကို ပြောပြမယ့် ပြင်သစ်ကဒ်များ -၂
ဇော်ထွဋ် - လွန်မြောက်ခြင်း၊ ယဉ်သကိုနှင့် ဘကြီးမိုးညချမ်း
မိတေဖိုး - "အမုန်းစကားများအတွက် အသုံးချခံ မိန်းမသားများ"
စံပယ် - အလှနဲ့သစ္စာကိုကွယ် ဖွေရှာ မောရတယ်
Blog Archive October 2020 (62) September 2020 (104) August 2020 (111) July 2020 (101) June 2020 (93) May 2020 (140) April 2020 (181) March 2020 (141) February 2020 (99) January 2020 (147) December 2019 (116) November 2019 (122) October 2019 (135) September 2019 (97) August 2019 (85) July 2019 (126) June 2019 (117) May 2019 (167) April 2019 (84) March 2019 (1)